Deeqaha waxbarashada ee soo galootiga iyo qaxootiga ee dalka Mareykanka | USAHello
Ma waxaad raadineysaa deeqaha waxbarasho ee soo galootiga iyo qaxootiga? In USA, waxaa jira deeqo waxbarasho oo badan oo gaar ahaan loogu talogalay qaxootiga iyo soo galootiga. On this page, waxaad ka heli doontaa deeq waxbarasho ee gobolku, by dhalashadiisa, iyo topic barashada. Waxaad ka dalban kartaa deeq waxbarasho si ay u caawiso bixinta waxbarashada.
Waa maxay deeqaha waxbarasho?
Deeqo waa abaalmarin lacag kaa caawinaya in aad bixiso waxbarashada. In USA, arday badan codsato deeq waxbarasho si ay u caawiyaan bixiyo college. deeq The on this page gaar ahaan waxaa loogu talagalay ardayda qaxootiga iyo soo galootiga. Qaar ka mid ah iyaga ka mid ah waxaa loogu tala galay “jiilka kowaad” ardayda. Tani waxay noqon kartaa in waalidiinta ay ahaayeen soo galootiga ama qaxootiga. Waxa kale oo macnaheedu noqon karaa in aad tahay muhaajir ama qaxooti oo hadda uu leeyahay dhalashada. Waxaa sidoo kale deeqaha waxbarasho ee ardayda aan u dhalan.
deeq Qaranka ee muhaajiriinta iyo qaxootiga
CharterUp Qaranka Deeqda Waayo, soo galootiga iyo qaxootiga
Mid ka mid ah deeqda waxbarasho ee $10,000 waxaa la siiyaa sannad walba. Tani deeq waxbarasho waa non-cusboonaysiin karo. Taasi waxay ka dhigan tahay in aadan mar kale ka heli doonaa sanadka soo socda. Waxaa lagu saleyn karaa hal sano waxbarasho. Codsaduhu waa inuu la dhashay ka baxsan USA iyo waa hore u ahaan dugsiga (ama aqbalay) sida arday undergraduate waqti-buuxa ah ah jaamacad la aqoonsan yahay ama jaamacad Maraykanka. dugsiga sare ee doonaya inay isku qoraan college sidoo kale xaq u leedahay. qoraalka A dhawaan waa inuu tusaa GPA ah 3.4 ama ka weyn.
Dream.US Deeqda - Deeqda Qaranka
deeq la cusboonaysiin karo la doon gunno suuragal ah riyooda (DACA iyo TPS). doon gunno A waa lacag aad heli karto marka lagu daro in aad deeq waxbarasho. waa in la qorsheynayo in aad qorto waqti buuxa ee associate ama bachelor ee barnaamijka shahaadada markii ugu horeysay. qalin-jabisa dugsiyada sare (ama HSE shahaadada) waa in ay haystaan ​​GPA 2.5+. qalin college Community waa in ay haystaan ​​GPA 3.0+. Waa in aad xaq u leedahay in-gobolka waxbarashada ee jaamacadda lammaane.
Dream.US Deeqda - Deeqda Opportunity
Deeqda for riyooda (DACA ama TPS) ku nool dalalka halkaas oo ay ku yeelan doonaan in ay bixiyaan kharashka waxbarashada out-of-gobolka ama aan la aqbali dugsiyada ee ay gobolka. Waa in aad qalin dugsiga sare ama kasbaday shahaado HSE la GPA 2.8+ .
Gates Barnaamijka Bartayaasha ee Millennium
Deeqo for African American, American Indian / Alaska Native, Asian Pacific Islander American, iyo ardayda Hispanic American. Waa in aad haysato a “baahida loo qabo maaliyadda weyn” ee dalka Mareykanka. Waxaad u baahan doontaa in aad sheegtid inta lacag ee qoyskaaga ka dhigaysa oo ay go'aan ka gaari doona haddii aad codsan kartaa.
Contact: Foomka online at http://gmsp.org/a-contact-us/#
Paul iyo Daisy Soros Fellowship Mareykanka cusub
A $90,000 abaalmarinta ka weyn 2 sano ee soo galootiga, qaxootiga, iyo jiilka kowaad ee Maraykanka. waa in la qorsheynayo in aad qorto wakhti buuxa barnaamijka shahaado. Waa inaad sidoo kale in ay ka yar da'da 31.
Orodka ee Deeqda Bulls ee loogu talagalay dadka ajnabiga
laba $1000 deeq soo guuray ama reer waddanka u soo guurey. Si aad ugu qalantid waa in aad ku kulliyad 4-sano ama waa in aad la aqbalay by kulliyad 4-sano. Your GPA waa in ay noqdaan 3.0 ama wax ka sareeya iyo weliba. Email: scholarships@runningothebulls.com
Non-profit bixiya in-qof / taageero online lacag la'aan ah. Waxay bixiyaan iyo deeqo waxbarasho ardayda dakhligoodu hooseeyo laga bilaabo ay baroosaska codsiga jaamacadda in ay qalin-ka college.
Deeqaha waxbarashada gobolka
Tani waa liiska deeq loogu talogalay qaxootiga iyo soo galootiga ee gobolo kala duwan.
dadka degan California: fadlan ka fiiri bogga internetka ee ah Fund Asian Pacific. fund ayaa maamusha dhowr deeq weyn ee California oo ay ku jiraan ardayda Filipino, Asian, iyo Island Pacific dhaxal ahaan, iyo shaqaalaha beeraha-galootiga. Waxaad kala soo bixi kartaa codsiyada oo dhan oo iyaga ka mid ah oo ku saabsan bogga internetka ee deeqda waxbarasho.
Haajiriinta kacaya Fund Scholarship
Deeqda oo ah ilaa $7,000 soo guuray dakhligoodu hooseeyo. Waa in aad ka qalin dugsiga sare ama ku qoran barnaamijyada kulliyad iyo graduate. Waa in aad ku nooshahay ama dhigato dugsi ku yaal Aagga San Francisco Bay. macluumaad Contact waa website-ka marka codsiyada furan yihiin. Ama waxaad email u diri kartaa nancy@immigrantsrising.org.
Deeqda loogu talagalay ardayda waddanka u soo guurey ee jiilka kowaad. Waa inaad noqotaa muwaaddin Mareykan ama degan sharci ee deggan California.
District of Columbia, Maryland, iyo Virginia
Sanduuqa Waxbarashada Esperanza
Ardayda ku dhashay meel ka baxsan USA ama qaba labada waalid ku dhashay meel ka baxsan USA iyo qorsheyneysa inay qorto waqti-buuxa ah machad la aqoonsan yahay dadweynaha ama jaamacad. Codsadayaasha waa in ay noqdaan a qalin sare oo ka tirsan dugsiga sare ee District of Columbia, Maryland, ama Virginia ama Goon a GED dhawaan deggan DC, Maryland ama Virginia. deeq waxbarasho ayaa u dhaxayn $5000 in $20,000, ku xiran tahay baahida loo qabo maaliyadda. qaata deeqda waxbarasho loo soo xulay ku salaysnaan doonaa tayada dhaqan qiimeeyo oo soo bandhigay by bulshada soo galootiga ah. Esperanza sidoo kale ardayda siinayaa hanuunin bixiya si ay u caawiyaan maraan college, layliyo iyo laga bilaabo xirfado. Codso online.
HIAS siisaa deeqo waxbarasho tacliinta ardayda haajiray ama qoyska u haajiray aagga Chicago la gargaarka ee HIAS Chicago, ama kii heli HIAS’ socdaalka iyo jinsiyadda adeegyada mar ee dalka Mareykanka. Deeqda waxaa ka mid ah: Deeqda Benton-Bernstein kuwa gelaya xirfadaha caawinta; Deeqda Tilly Warshaw qalin-jabisa dugsiyada sare, iyo dhowr kale.
IIE - Deeqda Julia Stasch Qaxootiga iyo Asylee Ardayda
The Institute of Education International (IIE) dalabyo Deeqda Julia Stasch Qaxootiga iyo Asylee Ardayda ardayda taageerada kuwaas oo waxbarashada ka mid ah Kulliyadaha City of Chicago ama Community College a in Chicagoland. Fadlan la soco in ardayda in ay USA ku yimid qaxootinimo ama lagu siiyay magangelyo iyo hadda yihiin deganaansho joogta ah ama muwaadiniinta waa sidoo kale xaq u leedahay.
Awardees heli doontaa a $10,000 deeq waxbarasho si ay u daboosho kafado waxbarasho aad u fiican, kharashka nolosha, iyo kharashyada kale ee la xiriira waxbarashada. Deeqdan ayaa sidoo kale waxaa ka mid ah Barnaamijka hoggaanka 1-todobaad ah in xagaaga 2020 in ardayda la siiyo xirfadaha hogaaminta.
Deeqda James Angelo Memorial Social Justice
A deeq 2-sano in ay ka qayb Southern Maine Community College. Waxaa la siiyay muhaajiriinta Afrika ka qalin dugsiga sare Portland a.
Fred S The. Deeqda Findling waa abaalmarinta hal mar of a $1500. Waxaa u furan waddanka u soo guurey kasta oo ka diiwaan gashan kuliyadaha Michigan a. Awards lagu siiyo iyadoon loo eegeyn jinsiyadda, diinta, nooca galmada, da, ama dhalashadiisa. Uma baahnid in aad in aad ku buuxisid arji ama qori maqaalka ah. Si aad u dalbato, diri video ah sawir 30-labaad sharxaya sababta aad u mudan yihiin deeq this. Videos in muddo ka badan yihiin 30 seconds looma tixgelin doono.
Liiska badan 70 deeq waxbarasho la mid ah codsiga ee arday ka qalin. Waa in aad ku nooshahay dugsiyada sare ee Gobolka Kent. Waxaad sidoo kale u tagi kartaa dugsiyada sare ee Allegan, Barry, Ionia, Ottawa, Montcalm, Muskegon, ama gobollada Newaygo.
Email: (Sarkaalka Barnaamijka Waxbarashada Bishop Ruth) rbishop@grfoundation.org
qaabka Deeqda Foundation / DH Gustafson Family Foundation
deeq A for jiilka kowaad ee Maraykanka ah ama soo galooti. Waa in aad ka qalin Eagan ah, dugsiga sare ee Minnesota. Waxaad codsan kartaa hal codsi oo deeq waxbarasho iyo 100+ deeqo waxbarasho kale ee Foundation Eagan ah.
Kori Fund Waxbarashada
Kori Fund Educational abaalmarinta deeq waxbarasho laga bilaabo $2,500 in $20,000 guurey ee ardayda iyo reer muhaajiriinta kuwaas oo ka qalin dugsiga sare City New York ah inay ka qayb galaan kulliyadaha iyo jaamacadaha guud ama kuwa gaarka ah, iyadoo aan loo eegin qowmiyadda, asal qaran, ama xaaladda socdaal. Codso online markay tahay wakhtiga arjiga furmay November.
Deeqda University Columbia ee Ardayda Ku Barakacay
taageerada deeqda waxbarasho ee ardayda meel kasta oo dunida ka jirta oo aan awoodin barakacay si ay u dhamaystiraan ay waxbarashada sare. Ardaydani waxay heli doonaan waxbarasho full, guryaha, iyo kaalmo ku nool iyagoo sii wadanaya undergraduate ama qalin degrees oo dhan 18 dugsiyada Columbia iyo xulufadeeda, oo muujineysa Columbia ay ka go'an tahay hay'adaha buuxda u qabashada dhibaatooyinka adduunka. Barnaamijkan wuxuu kor u samayn doonaan in ay $6 milyan oo taageero ilaa 30 ardayda sanad walba. Mentoring iyo taageerada la siin doono deeqda waxbarasho, iyo sidoo kale dugsiyada iyo kooxaha ardayda ee Columbia. Codso internetka ee deeq page codsiga.
barnaamij deeq waxbarasho waxaa loogu talagalay dadka ajnabiga ah haysta sharci qaxooti ama kuwaas oo heshay US magangelyo ama gudbisay codsi magangalyo US, ama waa in Mareykanka hoos Aqoonsi Badbaadin Ku meel.
Mary Rosenblum Sayidka Scholarship
The fund Deeqda Mary Rosenblum Somit bixisaa $4,000 ($2,000 dugsiyeed kasta) si undergraduate ah ee Jaamacadda Buffalo, New York, kaasoo majoring ee Kiimikada noole, cilmiga Biomedical ama Farmashiiste iyo toxicology. Xulasho waxaa la siiyaa ardayda kuwaas oo waddanka u soo guurey, reer waddanka u soo guurey ama ardayda kulliyadda jiilka kowaad. Codso website-ka.
Deeqda Achievement Qaxootiga iyo ajnabiga ee Gobolka Wake
Deeqda waayo, jiilka kowaad ee muwaadiniinta Maraykanka, qaxootiga, iyo muhaajiriinta ka qalin Wake dugsiga sare County a. Uma baahnid inaad waraaqo sharci ah si aad u dalbato.
The Deeqda Refugee Student Connect
Deeqda dadka qaxootiga ah ee deggan aagga iyo-gobolka Greater Cincinnati. Dhammaan qaxootiga ku raad tacliinta sare ee dadweynaha, gaarka ah, kulliyadda farsamada ama jaamacadda ee USA ka codsan kartaa. Ma jiraan xayiraad da'da.
Ann Biggs / Deeqda Thelma Salazar ka fadilnaa for First-Generation Children Immigrant
deeq waxbarasho waxaa loogu talagalay carruurta waddanka u soo guurey ee jiilka kowaad - kuwa ugu yaraan hal waalid kuwaas oo u haajiray Maraykanka. Xulasho waxaa la siin doonaa carruurta ajinebiga Mexico ama Central America.
Mid ka mid ah Qaxootiga
deeq Full iyo la talinta ardayda wakhti buuxa la qaxootiga, doorashada la siiyaa ardayda Freshman bilaabo ee Kulliyadda bulshada. Waa in ay ilaaliyaan GPA ah 2.5 ama ka sareeya.
Alfred Hugo Radke iyo Gerda kale Deeqda Radke
Deeqda oo ah $1000 heerka caalami ee dalka ama hore ee qarnigan arday Maraykan ah kuwaas oo ujeedadu waa in laga University Averett u qalin iyo muujinaysaa baahida loo qabo maaliyadda. Waa in celcelis heer dhibco of a 3.0 ama ka fiican.
Deeqda oo ah $500 abaalmariyey ah dhalinyarada American jiilka kowaad. Waa in aad u caddeeyaan baahida dhaqaale iyo qorsheyneysid inaad tagto mid ka mid ah 7 kulliyadaha bulshada ee jaamacadda Wyoming.
kharashka imtixaanka SAT iyo jaamacadda lacagta codsiga ka cafinta
SAT imtixaanka iyo lacagta codsiga kuliyadaha dhaafitaanka
Waxaa loogu talagalay ardayda kuwaas oo qoysaska dakhligoodu hooseeyo. dhaafitaanka A ka dhigan tahay in aadan u baahan doontaa inaad bixiso kharashka. Waxaad codsan kartaa ilaa afar dugsi. Ka dhaafitaanada ayaa diyaar u ah 11-dakhligoodu hooseeyo iyo ardayda fasalka 12aad ee USA ama US dhulalka. muwaadiniinta Mareykanka ku nool meel ka baxsan USA waxaa laga yaabaa in ay leeyihiin lacagta ujrada imtixaanka laga dhaafo. Waxaad ka dalban kartaa SAT ardey oo lacag Test Subject haddii aad ku jirto fasalada 9 iyada oo loo marayo 12.
Deeq beeraha gaarka ah ee waxbarasho
Ariane de Rothschild (ADR) Saaxiibkiisamarkab: Social Ganacsi & Network Cross-dhaqanka
A is weheshi labo isbuuc ganacsatada iyo madaxda bulshada. wehelnimo A shaqo halkaas oo aad bixin. halkii, waxaad ka heli si ay u bartaan xirfado cusub iyo kulmaan dadka ku caawin kara. Waa in aad daneyneyso in isbedel iyo dhaqanka cross-hadalka. Waxaa aad u fiican haddii ay tahay wada hadalka u dhexeeya beelaha Yuhuudda iyo Muslim.
Contact: Foomka online at http://adrfellowship.org/contact/
Catholic Relief Services International DevelopmeAxdiga Cusub Barnaamijka oo waxmatarayaal ah
Barnaamij is weheshi 12 bilood oo loogu talagalay dadka kuwaas oo ka shaqeeya xirfad horumarinta caalamiga ah. Waa in aad haysataa shahaado ah beerta ku habboon horumarinta caalamiga ah. Waxaad sidoo kale waa in ay ku qaatay ugu yaraan 6 bilood dibada ee dal soo koraya. Waa in aad si fiican ugu Ingiriisi iyo luqad labaad ahaan.
Ingiriisi ku hadla Luqadda Heritage (HLS) Barnaamijka
Barnaamijka A 8 bilood in hagaajinaysaa xirfadaha isgaarsiinta English ka sare heerka xirfadeed-. deeq A buuxa dadka la aqbalo in barnaamijka lagu siin doonaa. baahan yahay waa in aad in aad u hesho shaqo leh xukuumadda federaalka marka aad dhamaysid barnaamijka.
Barnaamijka Deeqda Western Union Foundation Qoyska
Deeqda oo ah $2,500 loogu talagalay si ay u taageeraan dadka dhalinyarada ah oo adduunka ah ee raba inay kuliyad galaan. Waa inaad u dhexeeya da'aha 18-26. waa in aad doorataa degree ah undergraduate duurka STEM ama ganacsi.
Sawirka Molly Haley, Portland Barnaamijka Waxbarashada dadka waaweyn.
Deeqo kooxo gaar ah iyo Jinsiyadaha
Qaar ka mid ah aasaaska, ururada iyo ururo xirfadeed lacag badbaadin deeq abaalmarinta in ay dadka ka tirsan qowmiyado gaar ah.
Ardayda ka soo jeeda Afrika
Culimada Future of Africa (FSA)
Culimada Future of Africa (FSA) waa urur ku salaysan Utah doon ahayn abuuray by ardayda, ee ardayda. FSA waxay siisaa ardayda dugsiga sare iyo kuleejka kuwa waddanka u soo guurey, qaxootiga, ama wadanka laga Africa iyadoo deeq waxbarasho, kudayasho, iyo umeerin lacag la'aan ah ee maaddooyinka oo dhan. Adeegyada waxaa kartoo ku haboon baahida arday kasta. Tusaale ahaan, dugsiga sare ardayda qorsheyneysa inay kuliyad galaan, ay bixiyaan hanuunin for ku saabsan sida loo guulaysto college oo dhan. Email haddii aad xiisaynayso in kaalmo ka helaya FSA.
Asian, ardayda South East Asia iyo Jasiiradaha Basiifikada
Deeqda Fund Pacific Asian
2 in 3 deeq waxbarasho ah $2,500 - $5,000 kasta oo loogu tala galay ardayda qowmiyadda Asian iyo / ama Jasiiradaha Pacific iyo degan California (deegaanka Bay doorbiday). Download codsiga internetka ee. Maamula Fund Pacific Asia.
Fund Deeqda Asian iyo Pacific Islander American
Deeqo for Asian iyo / ama Pacific Islanders iyada oo diiradda la on ardayda u baahan dhaqaale xoog leh iyo / ama waxaa ugu horeysay ee qoysaskooda inay kuliyad galaan kuwaas oo dhigata jaamacadaha gaar ah (arki website liiska).
Deeqda ardayda muujiyaan dhaq ee Islander Asian iyo Pacific (API). Waxa kale oo loogu talagalay lesbian, gay, bisexual, transgender, iyo ijnsiga (LGBTQ) bulshooyinka waxbarasho ee dugsi ku yaal Maraykanka.
Noolaynta Center Deeqda
Deeqda la siiyo ardayda undergraduate iyo qalin dano. Waa in aad la qorsheynayo ku saabsan barashada sayniska, ardayda caafimaadka ama biology dhaxalka Asian Southeast.
Ardayda ka soo jeeda Arab
American Mideast Hoggaanka Network
Deeqda la siiyay ku salaysan tartan ardayda dhaxalka Carabta. Waa in aad la baneeyey; on codsanaya in Kulliyadda bulshada, afar sanno college, iyo dugsiga ka qalin. dugsiga waa in uu ahaadaa in New York, New Jersey, ama Connecticut.
Dhowr deeq waxbarasho diyaar u ah Arab Americans ama shaqsiyaad ka soo jeeda Carab waxbarasho ee USA. Fadlan booqo website-ka liiska buuxa ee deeqaha waxbarasho.
Deeqda loogu talagalay ardayda ka soo jeeda Arab. Waa in aad yar a, dugsiga ka qalin sare oo ka tirsan ama ka qaybgalka oo duurka ku ah warbaahinta ama saxaafadda. Waxa kale oo aad la majoring karaa saxaafadda, radio, TV-ga iyo / ama film. Waa inaad sida hoose ama sare oo ka tirsan barnaamijka undergraduate. Waxa kale oo aad noqon kartaa barnaamijka qalin a.
Network of Professionals American Carabta
Deeqda for Arab-Americans qaba fasalada heer sare ah oo ay ku lug yeelato dooda iyo in ay bulshada.
Contact: Foomka online at http://www.naaponline.org/about-naap/contact/
Arab American Association of Injineerro iyo Horseedayaashii (O) – Capital Area
Deeqda for undergraduate ama qalin ardayda wakhti buuxa. Waa in aad waxbarashada injineernimada, naqshadaha, sayniska kombiyuutarka, ama IT. Waa inaad xubin arday hadda AAAEA – Capital Area ama ilmo ah xubin ka mid ah hadda.
Golaha Business The Arab American Haweenka
Deeqda loogu tala galay dumarka American Carabta ka barata dugsiyada Michigan.
Contact: Yvonne Ibraahim Email: yabraham@aawbc.org
Ardayda ka soo jeeda Filipino
Sanduuqa Waxbarashada Banatao Qoyska Filipino American
Shan deeqaha waxbarasho ee $5000 mid kasta siiyey sanad walba ardayda oo ah ugu yaraan 50% dhaxal ahaan Filipino ee ku nool California. Download codsiga internetka ee. Maamula Fund Pacific Asia. Phone: (415) 395-9985 Email: scholarship@asianpacificfund.org
Ardayda ka soo jeeda dalka Iran
Deeqda loogu talagalay ardayda waddanka u soo guurey ee jiilka kowaad. Waa in uu ahaado muwaadin Mareykan ah ama degan sharci ee deggan California.
The Foundation Deeqda Iran
deeq badan ee ardayda ka soo jeeda dalka Iran oo ku salaysan baahida loo qabo maaliyadda, ka qaybgalka bulshada, ama hanashada tacliimeed.
deeq Multiple la heli karo si qalin ardayda dugsiga sare iyo ardayda ay ka buuxaan college waqti ka soo jeeda dalka Iran.
ardayda Latino / Hispanic
Fund Deeqda Hispanic
Deeqda ee ardayda Hispanic doonaya 4-sano ama sare degrees. Deeqo dhaxayn $500 in $5,000 ku salaysan baahida qaraabo.
Contact: Foomka online at https://www.hsf.net/en_US/contact-us
The MALDEF Deeqda Guide Resource
Liiska deeq waxbarasho, ay ka mid yihiin Barnaamijka Deeqda Waxbarasho ee Dugsiga Law MALDEF ah. Waxaa loogu talagalay ardayda sharciga kuwaas oo doonaya in ay horumariyaa xuquuqda madaniga ah ee bulshada Latino.
Contact: Foomka online at http://www.maldef.org/contact/index.html
Hoggaanka American Salvadorian iyo Sanduuqa Waxbarashada ee (SALEF) Fulinta Our Fund Dreams Scholarship
Deeqda Central American iyo ardayda Latino ee doonaya inay isku qoraan college. Waa in aad ku nooshahay degaanka Los Angeles. Deeqo waxay u furan yihiin dhammaan ardayda loo eegin qaabka sharci.
Ardayda ka Myanmar
Deeqda loogu talagalay ardayda cusub ee ka soo Myanmar doonaya degree associate ah oo ka tirsan jaamacadda Shacabka.
Ardayda ka soo jeeda Falastiin
Deeqaha waxbarashada ee ardayda Falastiiniyiinta iyo Falastiiniyiinta American Guryahoodii dakhligoodu hooseeyo.
Sanduuqa Deeqda Assistance Refugee Degdegga ah
Deeqda la siiyo ardayda ku nool dunida ee ay yihiin qaxooti ama magangalyo-doonka ka Syria.
Deeqaha waxbarashada ee qoysaska shaqaalaha muhaajiriinta ah
Barnaamijka Migrant Assistance College (XERO)
Barnaamijka Migrant Assistance College The (XERO) waa barnaamij dawladda dhexe maal-galiso waxbarashada taageero iyo deeq waxbarasho ka caawisaa in ka badan 2,000 ardayda sanad walba ka soo jeeda beer-shaqo-galootiga iyo xilliyeed in ay gaaraan oo ku guulaystaan ​​kuleejka. Ka qaybgalayaashu waxay helaan kaalmo dhaqaale inta lagu jiro sanad Freshman ay of kulliyad iyo taageero tacliimeed socda ilaa ay qalinjabinta. Waxaad ka hubin kartaa Liiska barnaamijyada XERO si aad u aragto haddii ay jiraan waa barnaamij deeq waxbarasho ah ee gobolka.
Fund Gloria Mattera National Deeqda Migrant
qiimihiisu Scholarship $500 ee ardayda galaya ama ka diiwaangashan college ama barnaamijyada kale ee waxbarasho. Waxa kale oo loogu talagalay dadka kuwaas oo aan buuxiyaan dugsiga sare, laakiin tusin ballan u leh awood in ay sii wadaan waxbarasho.
Contact: Chris Norton, Agaasimaha
Deeqda Lapiz Qoyska
A $2000 deeq loogu talagalay shaqaalaha beeraha ama ilmo ah shaqaalaha beeraha ee wax soo jeeda jinsiyad ama sinjiyad. Waa in uu ahaado muwaadin u dhashay Mareykanka ama deganaanshaha joogtada ah. Download codsiga internetka ee. Maamula Fund Pacific Asia.
Deeqo for New Americans ama muwaadiniinta ah ee jiilka kowaad
Paul The & Daisy Soros deeqdan Mareykanka cusub
A $90,000 deeqda la siiyay in ka badan 2 sano ee soo galootiga, qaxootiga, iyo jiilka kowaad ee Maraykanka. waa in la qorsheynayo in aad qorto wakhti buuxa barnaamijka shahaado. Waa inaad sidoo kale in ay ka yar da'da 31.
Deeqda ee muwaadiniinta ah ee jiilka kowaad, qaxootiga, ama soo galooti yimid dugsiga ee Gobolka Wake, North Carolina. Ma jiro dukumentiyada la iga rabo.
Douvas Memorial Scholarship: Generation First Deeqda American
Deeqda waayo, jiilka kowaad ee Mareykanka ku nool Wyoming. Waa in aad la qorsheynayo inay ka qayb galaan mid ka mid ah gobolka ee 7 Kulliyadaha bulshada ama jaamacadda Wyoming.
Deeqda qaabka Foundation / DH Gustafson Family Foundation
Deeqda waayo, jiilka kowaad ee soo galootiga Mareykanka ama ka qalin Eagan ah, dugsiga sare ee Minnesota. Codso la mid codsiga deeqda waxbarasho iyo 100+ deeqo waxbarasho kale Foundation Eagan ah.
Deeqo la waraaqo ma loo baahan yahay
Deeqda soo guuray, muwaadiniinta ah ee jiilka kowaad, ama qaxootiga (waraaqo ma loo baahan yahay) kuwaas oo dugsi ka dhigatay County Wake, North Carolina.
Deeqda Dream Fund CPS
talanti A iyo deeqda waxbarasho ku saleysan baahida for riyooda dhigata dugsiyada dadweynaha Chicago.
Deeqda oo ah ilaa $7,000 soo guuray uu dakhligoodu yar yahay ka qalin dugsiga sare. Waxa kale oo aad la qoro karaan barnaamijyada kulliyad iyo qalin ku nool / dugsiga Aagga Gosha San Francisco ee ka qayb.
Haajiriinta kacaya sidoo kale dhawraa ah Liiska updated of scholarships kale in aan u baahnayn caddeyn dhalashada ah ee degenaanshaha.
Golden Door Culimada
Deeqda loogu talagalay ardayda fasalada-weyn. waa in la qorsheynayo in aad ku eryan degree undergraduate ah kulliyadda a 4-sano. Codsadayaasha waa in la oggolaado DACA ama TPS. Waa in aad xaq u leedahay in ay ka qayb galaan layliyo bixisay.
Deeqda Dream Mexican-American
barnaamij deeq waxbarasho waxaa la siiyaa Golaha Mexico Federations ee North America (cöfe). Waxaa abaalmarinta deeqaha waxbarasho ee $500 ardayda Community College iyo $1,000 ardayda undergraduate dhigata kuliyadaha ama jaamacadaha afar sanno ee Los Angeles, Orange, Riverside, Inland Empire, dalalka San Bernardino iyo Ventura ee California. Codsaduhu waa in loo tixgeliyo aan sharciga lahayn ama waa ka AB-540 ama DACA ka faa'iideysan. Sidoo kale waxay noqon kartaa xubin ka mid ah ama la xidhiidha xubin ka mid ah xiriirka COFEM-la jaalka ah ama kooxda.
Deeqaha waxbarashada ee qaxootiga ama magangelyo-doonka
Deeqda Champlain College New American Student
Ma u baahan tahay ku salaysan deeqda waxbarasho ee qaxootiga Vermont iyo ardayda magangalyo raadinaya. Tani waxaa kaliya loogu talagalay ardayda qorsheyneysa inay ka qayb galaan Champlain College.
Emergency gargaarka qaxootiga fund deeq waxbarasho
Ay heli karaan ardayda ku nool dunida ee ay yihiin qaxooti ama magangalyo-doonka.
Sanduuqa Deeqda Rafaa yaryar ee Qaxootiga
Deeqda la siiyo dadka qaxootiga ama magangelyo-doonka qorsheyneysa inay ka qayb galaan University of Dadka.
Scholar Fund Samatabbixinta IIE The
Tani waa sannad-dheer is weheshi ah. wehelnimo A waa shaqo aan mushahar lahayn, halkaas oo aad ka heli si ay u bartaan xirfado cusub. Waa Professor, cilmi, iyo waxgaradka dadweynaha kuwaas oo la kulmi hanjabaad in ay noloshooda iyo mustaqbalkooda in dalalkooda.
Deeqda loogu tala galay dumarka
AAUW deeqaha horumarinta mustaqbalkiisa
Deeqaha Horumarinta Xirfadda maaliyad siiyaan haweenka haysta shahaadada bachelor iyo isku diyaarineysa si loo horumariyo ama la bedelo xirfadaha ama hawgu shaqaalaha. tixgelin Primary la siiyo dumarka midabka iyo haweenka ku raad heerka sare ugu horeysay ama aqoonsiga ee beeraha midabbo. Codsadayaasha waa inuu ahaado mid laga xoreeyo. muwaadiniinta ama deganaanshaha joogtada ah kuwaas oo shahaado la soo dhaafay ayaa la helay ka hor inta June 30, 2014. Funds ayaa diyaar u ah waxbarashada, ajuurada, buugaag, sahay, maxalliga ah ee gaadiidka, iyo daryeelka ku tiirsan. Codso website-ka.
Golaha Business The Arab American Haweenka (AAWBC)
Contact: Yvonne Ibraahim
Hegg The Hoffet Fund
koorsooyin xirfadeed ee dumarka kuwaas oo doonaya inay dib-u-geli ay beerta xirfadle. Waxa kale oo jira koorasyo ​​luqadda qabsashada dalkooda cusub ama koorsooyinka inay ka gudbaan imtixaannada qaran ee loo baahan yahay.
Thread Red Fellowship Award
The Fellowship Thread Red waxaa laga heli karaa dumarka college-ku xidhay ee ajinebiga ahi, kuwaas oo la galaya doonaa kulliyadda Maraykan ah ama jaamacad in xidhiidhka fall.The soo socda uu ka kooban yahay laba qaybood: a $1000 deeqdan waxbarasho iyo taageero kudayasho sannad-dheer. Ma jiraan wax GPA ama laga xoreeyo. shuruudaha degenaanshaha. codsiga waxay ka kooban tahay dhowr su'aalo jawaabta gaaban, laba maqaalo, iyo laba warqado ammaan ah in. Waxaan u baahan tahay in ugu yaraan mid ka mid ah recommenders noqon tixraaca waxbarasho, sida macallin ama lataliyaha a. Codso website-ka.
Deeqo qof walba
CareerOneStop deeq jiheeyaha
CareerOneStop waa website dawladda Maraykanka ah taas oo ka caawisa dadka shaqo iyo tababar shaqo u hesho. Waxay leedahay liiska deeq waxbarasho oo aad ka raadin kartaa. Waxaad shaandhayn kartaa heerka waxbarasho ama by meel ama labada. Under “tirsanaan koox loo baahan yahay,” xitaa aad shaandhayso kartaa in ay qoomiyad laga tiro badan.
Waxa kale oo aad codsan kartaa deeq, kuwaas oo ah nooc kale oo taageero dhaqaale oo waxbarashada. Xafiiska Gargaarka Ardayga ee Federalka siisaa deeqo, daymaha, iyo lacagta shaqo-waxbarasho kulliyadda ama shaqo dugsi. Codso at Codsiga Federaalka ah ee Gargaarka Ardayga Free (FAFSA).
Waxaa jira deeq badan ee soo galootiga iyo qaxootiga. Haddii aad og tahay dadka kale in aad ku darto, fadlan email noogu. Waxaana ku dari doonaa liiska.
Baro sida loo codsado college
Info on codsanaya kulliyadda